११ महिनामा वित्तीय संस्थाका १९ सय १३ शाखा थपिए | NewsKarobar
गृहपृष्ठ ११ महिनामा वित्तीय संस्थाका १९ सय १३ शाखा थपिए
११ महिनामा वित्तीय संस्थाका १९ सय १३ शाखा थपिए
गत आवको जेठसम्म १८० पालिकामा बैंकका शाखा खुले
गत आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा मुलुकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १९ सय १३ शाखा थपिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार जारी गरेको २०७५/०७६ को ११ महिनाको तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा स्थापनालाई तीव्रता दिएको पाइएको हो । यससँगै देशभर वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ८ हजार ५६४ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्ममा देशभर वित्तीय संस्थाको शाखा संख्या ६ हजार ६५१ थियो ।
नेपालमा १७६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । आर्थिक वर्षको ११ महिनामा २५ वटा वित्तीय संस्था थपिएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्था समीक्षा अवधिमा २६ वटा थपिएका छन् भने देशभर वाणिज्य बैंकको संख्या २८, विकास बैंकको ३२ र वित्त कम्पनीको संख्या २४ छ । गत वर्ष पूर्वाधार विकास बैंक पनि थपिएपछि कुल वित्तीय संस्थाको संख्या १५१ पुगेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको जेठसम्ममा देशभर वाणिज्य बैंकका ३ हजार ५३९ वटा शाखा छन् । त्यस्तै, विकास बैंकका १ हजार २५०, वित्त कम्पनीका २०५ र लघुवित्तका ३ हजार ५७० शाखा खुलेका छन् । अघिल्लो आवको असारसम्ममा वाणिज्य बैंकका ३ हजार २३, विकास बैंकका ९९३, वित्त कम्पनीका १८६ र लघुवित्त संस्थाका २ हजार ४४९ शाखा थिए ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्ने नीति लिएपछि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शाखा संख्या भने उल्लेख्य घटेको छ । २०७२/७३ मा राष्ट्र बैंकले मर्जर नीति अघि सारेपछि २०७५ चैतसम्ममा १६५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर प्रक्रियामा सामेल भए भने १२३ वटाको अस्तित्व नै समाप्त भएको छ ।
११ महिनामा १८० पालिकामा बैंकका शाखा
राष्ट्र बैंकको देशभरका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य भने अझै पूरा हुन सकेको छैन । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले २०७५ साल असोजभित्रै देशभरका सबै ७५३ वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलिसक्ने बताए पनि २०७६ जेठसम्म ७३० स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा स्थापना भएका छन् । यद्यपि, गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १८० वटा स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुलेका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म ५५० स्थानीय तहमा मात्र बैंकका शाखा खुलेका थिए ।
प्रदेश १ का १३६, प्रदेश २ का १३४, प्रदेश ३ का ११७, गण्डकी प्रदेशका ८३, प्रदेश ५ का १०९, कर्णाली प्रदेशका ६९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन् । प्रदेश १ का एउटा, प्रदेश २, ३ र गण्डकी प्रदेशका २/२ वटा, कर्णाली प्रदेशका १० वटा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ वटा स्थानीय तहमा बैंक पुग्न बाँकी छ । प्रदेश ५ का सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा स्थापना भइसकेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
वित्तीय पूर्वाधार अभावमा विकट क्षेत्रका स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खुल्न ढिलाइ भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ‘इन्टरनेट, विद्युतलगायतका वित्तीय पूर्वाधार पुग्न नसकेका दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा शाखा स्थापनामा केही ढिलाइ भएको छ,’ प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने, ‘स्थानीय तहले वित्तीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइरहेकाले अब चाँडै सबै स्थानीय तहमा बैंक पुग्नेछन् ।’
समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप १३.३ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप १३.५ प्रतिशतले बढेको थियो । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७६ जेठ मसान्तमा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप १९ प्रतिशतले बढेको छ । २०७६ जेठ मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दतीको अंश क्रमशः ९.२ प्रतिशत, ३२.५ प्रतिशत र ४७.६ प्रतिशत छ । २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो अंश क्रमशः ८.६ प्रतिशत, ३४.५ प्रतिशत र ४५.७ प्रतिशत थियो ।
पछिल्लाे - नयाँ कर नीतिमा व्यवसायीको असहमति किन ?
अघिल्लाे - १४ लाख ३८ हजार घुस रकमसहित सिँचाइ हाकिम बाटोमै पक्राउ